नेपाली राजनीतिमा तपाईंको योगदानलाई म नजर अन्दाज गर्न चाहन्न। घर डढाएपछिको खरानीको त काम लाग्छ भने तपाईं त जनताका प्रतिनिधिले पत्याएको प्रधानमन्त्री। त्यो पनि देशको कार्यकारी प्रमुख। तपाईंबाट तपाईंका विरोधीले त धेरै कुरा सिक्न सकेका छन् भने म त तपाईंको व्यक्तित्वको फ्यान नै हो। आफूले मन पराउने मान्छेले भरसक कमजोरी नगरोस् भन्ने लाग्ने रहेछ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो अनि खुला पत्र लेखेँ। तपाईं कुन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनु भयो, त्यो कुरा मैले कोट्याउन जरुरी ठान्दिन। तपाईंले के के कुरा पूरा गर्ने प्रतिवद्दता गर्नुभयो, त्यो पनि म महत्वपूर्ण ठान्दिन। तर, तमाम अनपढ र गरीब भएको हाम्रो देशका साधारण जनताले समेत खुट्याउन सक्ने एउटै कुरा मलाई पनि चित्त बुझेन, जसलाई म तपसीलमा लेख्न चाहन्छु। म बिषय वस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु: तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो र सपथ ग्रहणमा जानुभयो। ईश्वरका नाममा तपाईंले सपथ खानुभएन। ठिकै छ तपाईं भौतिकवादी नै हुनुहुँदो रहेछ।
रह्यो कुरा जनताको नाममा कसम खाने: त्यो त आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्नुहोला जनताका लागि के के गर्नु भो भनेर! यी कुरा अहिलेको विषयवस्तु होइन। अहिलेको मेरो प्रमुख चासोको विषय भनेको तपाईंको पहिरन हो। दौरा सुरुवाललाई सामन्तीको पोशाक भनेर तपाईंले सपथ ग्रहणमा त लगाउनु नै भएन र भारत भ्रमणमा पनि लगाएको देखिएन।
अर्को पट्टि हेरेँ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी कुर्ता पाईजामामा थिए। मैले बुझ्न सकिन: त्यो विदेशी सुट पाईन्टमा भादगाउँले टोपी के को पहिचान हो? कस्तो फ्यूजन या क्रम भंग हो? हुन त सामाजिक संजालमा प्रधानमन्त्रीको भन्दा प्रधानमन्त्री पत्नीले बस्दा उठ्दा र अन्य गतिविधिमा समेत आफ्नो ईज्जत राख्न सकिनन् भन्ने टिप्पणी आइरहेका छन्।
तर मेरो गुनासोको केन्द्रबिन्दु भनेको तपाईंको पहिचान बिनाको पहिरन हो। तपाईंको पोशाकमा न पहिचान छ, न त आर्थिकरुपमा मितव्ययीता, न नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै अंश। मलाई तपाईं नै बुझाइदिनुहोस् यो कस्तो पहिचान हो प्रधानमन्त्रीज्यू ? नेपालका सबै प्रधानमन्त्री दिल्ली जाने कारण सबै जनताले जानिसकेका छन्। देशलाई अर्थदेखि राजनीतिसम्म अस्थिर र परनिर्भर बनाउँदै सधैँभरि हिरा दिने र फलाम लिने होडबाजीमा तपाईंले के लिनुहुन्छ र के दिनुहुन्छ हेर्दै गरौँला।
शुक्रबार, भाद्र ३१, २०७३ १८:५०:२१